September 25, 2020 - Hargeele - Wararka Somali State
Soomaaliya September 25, 2020
Muqdisho (SONNA)-Guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada gobolka Banaadir mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Tuulax) ayaa warbaahinta Qaranka u xaqiijiyay in ciidanka Amniga howlgal ay ka fuliyeen Degmada Dayniile ay ku soo qabteen dhagarqabe ka tirsan Al-Shabaab. Mudane Tuulax ayaa xusay in dhagarqabaha oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Xassan Cali kana tirsan Sii akhriso
RASMI: Tababare Zinedine Zidane oo shaaciyey liiska 22-ka ciyaaryahan ee Real Madrid uu kala qeyb galayo kulanka Real Betis
Cayaaraha September 25, 2020
(Madrid) 25 Sebt 2020. Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa shaaciyay liiska 22 ka ciyaartoy ee uu ku shaqayn doono kulanka adag ee Real Betis. Zinedine Zidane liiska uu magacaabay xiddigihiisa Real Madrid uu ula safrayo Magaalada Seville si ay Sabtida ula soo ciyaaraan Real Betis waxaa ka soo muuqday Isco iyo Lucas Vazquez. […]Sii akhriso
RASMI: Kooxda Atletico Madrid oo xaqiijisay saxiixa Luis Suarez oo ay kala soo wareegeen Barcelona
(Madrid) 25 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ee ka dhisan caasimadda Spain ayaa goordhow ku dhawaaqday saxiixa Luis Suarez, kaasoo ay kala soo wareegeen naadiga Barcelona. Weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona Luis Suarez ayaa maanta gaaray garoonka diyaaradaha Madrid ee Barajas Airport ee Magaalada Madrid si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Sii akhriso
RASMI: Luis Suarez oo ka gudbay tijaabada caafimaad ee uu u maray Kooxda Atletico Madrid… + SAWIRRO
(Madrid) 25 Sebt 2020. Luis Suarez ayaa ku baasay baaritaankii caafimaad ee uu u maray Kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid goordhow isagoo heshiiska cusub u saxiixaya Los Rojiblancos. Ka hor inta uusan u bixin tababarka, isla markaana la kulmin asxaabtiisa cusub markii ugu horeysay, ciyaaryahanka reer Uruguay ayaa istaagi doona garoonka Estadio Wanda Metropolitano halkaasoo Sii akhriso
RASMI: Kooxda Barcelona oo shaacisay lambarka uu Philippe Coutinho u xiran doono kaddib markii lambarkiisii 7-aad uu la wareegay Griezmann
(Barcelona) 25 Sebt 2020. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa shaacisay lambarka uu u xiran doono xiddigeeda reer Brail ee Philippe Coutinho. Kooxda Gobolka Catalonia ka dhisan waxa ay xaqiijisay in Philippe Coutinho uu xiran doono xilli ciyaareedkan maaliyadda lambarka 14-aad kaddib markii uu ka soo laabtay heshiiskii amaahda ahaa ee uu ku jiray kooxda Bayern […]Sii akhriso
RASMI: Tottenham oo wareegga 16-ka Carabao Cup la ciyaari doonta Chelsea, inkastoo Spurs aysan dheelin wareeggii 32-ka Kooxood ee tartankan!
(London) 25 Sebt 2020. Kooxda Tottenham ayaa loo ogolaaday inay wareegga 16-ka Carabao Cup la ciyaarto naadiga Chelsea, inkastoo Spurs aysan ciyaarin wareeggii kaas ka horreeyey ee 32-koox. Tottenham ayaa loo qoray inay ka soo gudubtay kooxda heerka hoose ee Leyton Orient inkastoo aysan labada kooxood wada ciayarin sida uu xaqiijiyey maamulka tartankan Carabao Cup. […]Sii akhriso
Luis Suarez oo gaaray Magaalada Madrid si uu u dhammaystiro ku biiristiisa Kooxda Atletico Madrid… (Miyuu ciyaari doonaa kulanka Axadda?)
(Madrid) 25 Sebt 2020. Weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona Luis Suarez ayaa maanta gaaray Magaalada Madrid ee caasimadda dalka Spain si uu u dhammaystiro ku biiristiisa kooxda Atletico Madrid. Luis Suarez ayaa ka degay garoonka diyaaradaha Madrid ee Barajas Airport maanta oo Jimce ah si uu tijaabada caafimaad u maro isla markaana ay u soo […]Sii akhriso
Ole Gunnar Solskjaer oo si maldahan u sheegay inuu berri keydka dhigi doono daaficii sababta u ahaa guuldarradii Man United ka soo gaartao Kooxda Crystal Palace
(Manchester) 25 Sebt 2020. Tababaraha Kooxda kubadda cagta Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer ayaa si maldahan u sheegay inuu diyaar u yahay inuu isbedel ku sameeyo daafaca kooxdiisa kulanka Premier League ee berri oo Sabtida ah ay la ciyaarayaan naadiga Brighton. Hoggaamiyaha reer Norway ee Ole ayaa goob joog u ahaa iyadoo kooxdiisa ay guuldarro […]Sii akhriso
Muqdisho (SONNA)- Labada aqal ee Baarlamaanka dalka ayaa berri oo sabti ah 26-ka September yeelanaya fadhi wada-jir ah oo ay uga doodayaan heshiiska siyaasadeed ee doorashada oo ay 17-dii bishan gaareen dawladda Federaalka Soomaaliya, dawlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaas oo la doonayo inay ansixiyaan Baarlamaanka. Mudanayaasha golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa Sii akhriso
Afar qof ayaa middi tooreey ah lagu dhaawacay weerar ka dhacay meel u dhow xafiiskii hore ee jaraa’idka Charlie Hebdo magaalada Paris ee Caasimadda Dalka faransiiska. Wali lama sheegin sababta weerarkan iyo cida ay yihiin dadka geystay,hasa yeeshee maamulka Wargeyskaasi ayaa dhowaan sheegay in ay dib u daabici doonaan sawirro kaartuun ah oo horay loogu […]Sii akhriso